Krizy vokatry ny Covid 19 Nampihena ny sakafo hohaniny ny 29%-n’ny tokantrano
Ady amin`ny Covid 19 Tokony hisokatra ho an`ny hery rehetra
“Tokony hifanome tanana amin` izao vanim-potoanan` ny krizy ara-pahasalamana izao ary aorian` ny aretina vao tokony miresaka politika” hoy ireo mpanohana ny fitondrana .
Coronavirus 9 no maty tao anatin’ny herinandro
Olona 2 no namoy ny ainy tao anatin’ny 48 ora, ka 01 tany SAVA ny sabotsy teo, ary 01 hafa tany DIANA omaly alahady, araka ny tatitry nataon’ny Pr Vololontiana Hanta. 210 no namoy ny ainy hatramin’izay,
Tsy fanajana fepetra Olona 110 indray no voasazy
Na dia efa miha mihena hatrany aza ireo olona lasibatry ny valan’aretina Covid 19 eto amintsika dia mbola tsy foana tanteraka ny aretina.
Coronavirus 104 indray voa, 02 maty
Fifandrifian-javatra sa … Hivoaka ny CVO gélule, mitombo ny trangana Covid-19
Tena misy fiantraikany goavana eo amin’ny fiainan’ny isan-tokantrano ny krizy ateraky ny fiparitahan’ny COVID 19 eto amintsika. Voatery nanpihena ny fandaniana nataony avokoa ny rehetra, indrindra fa ireo very asa.
Raha araka ny fanadihadiana nataon’ ny INSTAT nanomboka ny fiandohan’ny volana jona teo mantsy dia ny 29 %-n’ny tokantrano miisa 1.240 nanaovana fanadihadiana no nampihena ny sakafo hohaniny. Niampy 17 % kosa ireo tokantrano nampihena ny zavatra hampiasainy tsy tena ilaina raha 40% ireo tokantrano miezaka miaina araka ny zava-misy. Ity moa ny andiany voalohany tamin’ny fanadihadiana natao raha amin’ity volana jolay ity indray no hotanterahina ny fanadihadiana andiany faharoa izay hitodika any amin’ireo orinasa isan-tsokajiny. Tanjon’ny INSTAT moa ny handrafetana ny drafitra nasionaly handraisana an-tanana ny lafiny ara-tsosialin’ny mponina sy hamerenana amin’ny laoniny indray ny lafiny ara-toekarena.